Ogaden News Agency (ONA) – Hawl wadeenada Jaaliyada Ogadeniya ee Koonfur Africa oo Kulan yeeshay
Hawl wadeenada Jaaliyada Ogadeniya ee Koonfur Africa oo Kulan yeeshay
Gudiga fulinta iyo gudi hoosaadka Jaaliyada Ogadeniya ee Koonfur Africa ayaa maanta kulan muhiima isugu yimid kulankan ayaa ka dhacay magaalada Port Elizabeth ee Xarunta gobolka Eastern Cape gaar ahaan xaafada Uitenhage.
Kulankan ayaa looga hadlayay qorshe-yaasha Jaaliyada oo larabo in horay loo dhaqaajiyo maal mahan inagu soo aadan waxaa ka soo qayb galay dhamaan xubnaha gudiga Fulinta iyo gudi hoosaadyada Jaaliyada Ogadeniya ee South Africa waxaana lagu furay wacdi Diini ah iyo Aayada Qur’an ah waxaana goobta ka akhriyay Sheekha Jaaliyada ee Arimaha Diinta.
Kulankan oo qaatay Saacado ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka soo jeediyay gudoomiyaha Jaaliyada Ogadeniya ee South Africa Mudane C/raxman Siciid khudbadaas ka dib wuxuu gudoomiyuhu aad ugu mahad celiyay Xubnihii ka soo qayb galay Kulanka C/raxmaan ayaa Sheegay in Arimaha Jaaliyadu u socdaan si wanaagsan isla markaana loo baahan yahay in la sii xoojiyo waxqabadka Jaaliyada iyo si dii ay bulshada Ogadeniya ee Ku nool wadanka South Africa ay wax muuqada ugu qaban lahaayeen Shacabka Ogadeniya ee ay xukuumada Itoobiya gumaysato.
Dhanka kale waxaa Kulanka Kahadlay masuuliyiin badan oo ka mida hawl wadeenadii Kulanka ka soo qayb galay waxaana si qododheer looga dooday dhamaan qodobadii Kulanka lagaga hadlayay.
Ugu dambayntii waxaa ka soo baxay kulanka qodobo muhiima oo ay Jaaliyadu ku dhaqaaqi doondo qabashadooda.
Jaaliyada Ogadeniya ee Koonfur Africa ayaa wada Abaabul xoogan oo bulshada ku nool wadanka loogu sheegayo in ay iska ilaaliyaan dadka u adeega gumaysiga Itoobiya ee ay soodirsadaan gacan yarayaasha Tigreegu. Waxayna Jaaliyadu u taagan tahay midnimada umada degta dhamaan gayiga Ogadeniya ee ay Itoobiya gumaysato.